Kamerà eny rehetra eny: Fanamby sy fahafahana ankehitriny eo amin’ny kihon-dalan’ny zon’olombelona, lahatsary sy ny teknolojia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Marsa 2019 4:07 GMT
Lahatsoratra bilaogy avy amin'i Talen'ny Fandaharan'asan'ny WITNESS, Sam Gregory ity.
Faly aho manambara ny fanombohan'ny tatitray vaovao: “Kamerà na aiza na aiza: Ireo fanamby sy varavarana misokatra amin'izao fotoana eo amin'ny fihaonan-dalan'ny zon'olombelona, lahatsary sy ny teknolojia.” Afaka mamaky sy mitroka izany ao amin'ny tranonkalanay ianao. Ny tatitra, toy ny hetsika mitovy anarana amin'izany, dia mikendry ny hiantoka fa afaka manao izany amin'ny fomba mahomby, azo antoka sy ara-etika araka izay azo atao ireo olona an'arivony mitodika amin'ny lahatsary hanandratana ny zon'olombelona .
Mampahatsiahy antsika ny revolisionan'ny “Lohataona Arabo” sy ny tolona mitohy ho an'ny fiovàna any Libia, Syria ary ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao fa manana anjara andraikitra lehibe amin'ny hetsika fiovàna ara-tsosialy sy ara-politika amin'izao androntsika izao ny finday, ny lahatsary ary ny aterineto. Manamarika ireo varavarana misokatra atolotr'ity tontolo mivoatra haingana ity sy ireo loza sy fanamby sasantsasany ny tatitra ataonay, indrindra ho an'ireo mpikatroka tsirairay izay manao vivery ny ainy amin'ny fijoroana sy ny fitsanganana ho amin'ny fanovana.
Ankoatra ny fananganana ity tontolo vaovao ho an'ny fampitam-baovao hita maso ity, dia manome tolo-kevitra manokana ho an'ireo orinasa, fikambanana sy ny olona tsirairay eo amin'ny sehatry ny teknolojia, politika, zon'olombelona, ​​sy ny fiarahamonim-pirenena, ary koa ireo izay manohana ara-bola sy mampiasa vola amin'ny tanjona toy izany ny tatitra ataonay.
Ekipa ao amin'ny WITNESS no namolavola izany tatitra izany, ka anisan'izany ny tenako, Bryan Nunez (Mpitantana ny teknolojia), sy Yvette Alberdingk Thijm (Tale Mpanatanteraka). Sameer Padania, Mpitantana ny Habakay taloha no mpikaroka voalohany sady mpanoratra. Mifototra amin'ny fanadihadiana niarahana tamin'ireo manam-pahaizana sy mpampihatra maherin'ny 40 momba ny sehatry ny teknolojia, ny fampitam-baovao sy ny politika ny fijerinay sy ny tolo-kevitray, ka anisan'izany ny olona toa an'i Bob Boorstin (Talen'ny Politikam-Panjakana, Google), Danah boyd (Mpikaroka menavazana, Microsoft Research), Steve Grove (Vaovao sy Politika ao amin'ny YouTube), Joi Ito (Tale, Media Lab, MIT), ary Marietje Schaake (mpikambana ao amin'ny Parlemanta Eoropeana).
Manantena izahay fa hahita ny fikarohan'ny tatitra miteraka hevitra ianao ary hiaraka aminay amin'ny fidirana eo amin'ny sehatry ny teknolojia, ny zon'olombelona sy ny politika ary hanohana ireo tolo-kevitra. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa ato momba ireo dingana manaraka horaisinay. Tsidiho ny takelaka “Cameras Everywhere Report” ao amin'ny tranonkalanay raha hijery tatitra bebe kokoa. Ary manasa anao izahay hiverina ao amin'ny bilaogy raha hijery ireo lahatsoratra ho avy mifantoka amin'ny tolo-kevitry ny tatitra sy ny fijerin'ny vahiny mpanoratra momba ny lohahevitra sasany.
Raha mpikambana ao amin'ny gazety ianao, tsidiho azafady ny fanambarana an-gazety raha mila fanampim-baovao sy hangataka antsafa.